4:11 pm, आइतबार, चैत २२, २०७७
इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेटको व्यवसायमा सफल ओलीज् स्टोर अब विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा लाग्ने भएको छ । सेग्वे नामक चिनियाँ ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधनको लागि नेपालको आधिकारीक वितरक बनेसँगै कम्पनीको नयाँ यात्रा सुरु भएको हो । ओलीज् स्टोरका संचालक लोकेश ओली त्यसै पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी मनपराउने मानिसको लागि परिचित नाम हो । अब उनले नेपाल ल्याउन लागेको सेग्वे ब्राण्डले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मेरोअटोले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विद्युतीय उपकरण विक्रीबाट सवारीसाधन विक्रीको बाटोमा लाग्नु भएछ । तपाईंहरुले ल्याउन लागेको ब्राण्ड र त्यसको थप योजना कस्ता छन् ?
विद्युतीय सामाग्रीमा हामी प्रिमियम ब्राण्डमा काम गरिरहेका छौं । अहिले विश्व अटोमोबाइलमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको विद्युतीय टेक्नोलोजीको नेपालमा विस्तार हुनु पर्छ भन्ने म पनि हुँ । यही परिप्रेक्षमा हामीलाई सेग्वे ब्राण्डले तपाईं हाम्रो उत्पादन नेपालमा बेच्नुहोस् भनेकोले यो नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको हो ।
म ग्याजेट बेचिरहेको मानिसलाई सवारी साधन विक्री गर्नु पक्कै सहज छैन होला । तर, आफूले सधैं बिजुली गाडीको प्रवद्र्धन हुनुपर्छ भनिरहेकोले आत्मविश्वास भने धेरै छ । यसको शोरुमहरु निर्माण गर्न पनि केही सहज हुने मैले ठानेको छु । मलहरुमा पेट्रोलबाट चल्ने साधनको शोरुम राख्न सक्ने अवस्था छैन । साधनको आवाज र पेट्रोलको धुवाँले मलभन्दा बाहिर यसको शोरुम निर्माण गर्नु पर्छ । तर, विद्युतीय साधनमा आवाज र धुवाँ दुवै नहुने भएकाले अहिले आफ्नै ग्याजेटको शोरुममा नै राखेर काम गर्न सकिन्छ भनेर सोच बनाएको थिएँ । तर, विस्तारै होइन छुट्टै शोरुम नै बनाएर काम गर्नु पर्छ भनेर ठाँउ खोजी रहेको छु ।
अहिले सबैभन्दा बढी ट्राफिक नियम मिच्ने दुई पाङ्ग्रे साधन छन् । उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । लामो रुटमा मोटरसाइकल चल्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ ।
तर, नेपालमा सवारी साधनको ब्राण्ड ल्याउने काम सहज रहेन छ । हामीले लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि केही यूनिट साधन ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं । स्याम्पल आउनै करिब ८ महिना लाग्यो ।
सेग्वे कस्तो ब्राण्ड हो ? किन यही ब्राण्डलाई छनोट गर्नुभयो ?
मैले चिनेको मानिस सेग्वे ब्राण्डमा गएको थियो । उसले मैले नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरेको भिडियोहरु हेरेको रहेछ । उसले ‘सेग्वे नाइन वट’ भन्ने कम्पनी ज्वाइन गरेपछि मलाई नेपालमा विद्युतीय साधन विक्री गर्न अफर गरेको हो । सेग्वे र नाइन वट मिलेर बनेको कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युतीय साधन हामी नेपाल ल्याउँछौं । यसले करिब १२ वर्षअघिदेखि एयरपोर्टहरुमा मानिस ओसार पसार गर्न कार्टहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । यो कम्पनीले इलेक्ट्रीक ह्वीचेयर पनि उत्पादन गर्दै आएको छ ।
यसको वेभसाइटमा थुप्रै मोडल देख्न सकिन्छ । नेपाल चाहिँ कुन-कुन प्रोडक्ट आउँदै छन् ?
अहिले सिपमेन्ट भएको प्रोडक्टमा किक स्कुटर हाे । सानो पावरको व्याट्रीबाट चल्छ भने ठूलो साइजको ब्याट्रीमा पनि आउँदै छ । यसका साथमा केही एशोसरिज पनि ल्याउँदै छौं । सेकेन्ड फेजमा इ-सिरिज र एन-सिरिजका इलेक्ट्रीक स्कुटर नेपाल ल्याउने छौं । इ-सिरिज हामी अबको केही महिनामा विक्री सुरु गर्छौं। तर, एन-सिरिजका स्कुटर आउन भने केही थप समय लाग्छ ।
इलेक्ट्रीक स्कुटर र किक स्कुटरमा कुन उत्पादनमा बढी फोकस हुने योजना छ ?
ब्राण्ड क्यारीको हिसाबले हामी धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्ट ल्याएर प्रदर्शनमा राख्ने योजनामा छाैं । इन्ट्री लेवलका अधिकांश मोडल ल्याउने योजना बनाएका छौं । यसले सेग्वे ब्राण्डको विश्वसनियतामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । तर, मासले प्रयोग गर्ने उत्पादन भनेको इलेक्ट्रीक स्कुटर नै हो ।
विद्युतीय सवारी साधको प्रवद्र्धनमा लागेको मानिस आफैँले ल्याएका प्रोडक्टलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
बिजुलीबाट चल्ने साधनलाई भोलिका दिनमा पनि म सबैका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने छु । मैले आफ्नो उत्पादन अरुकोभन्दा राम्रो छ भनेर भन्दिन । अहिले एकपटक गुगल गरेर हेर्ने हो भने हरेक उत्पादनको तुलनात्मक विष्लेषण हेर्न पाइन्छ । त्यसैले आफूलाई कस्तो उत्पादन चाहिन्छ भन्ने विषय ग्राहकले छनोट गर्न सक्ने छन् । मेरो पहिलो उद्देश्य भनेको नेपालमा विद्युतीय गाडी धेरैभन्दा धेरै विक्री हुनुपर्छ भन्ने हो ।
चीन र भारतमा उत्पादन भएका थुप्रै ब्राण्डले नेपाल प्रवेश गरेका छन् । यस्तोमा सेग्वे ब्राण्ड कहाँ रहन्छ ?
हामीले ल्याउने ब्राण्ड चाइनाको चल्तीको ब्राण्ड हो । भारतमा विशेषत: स्टार्टअप कम्पनीहरुले मात्रै विद्युतीय सवारी उत्पादनमा जोड दिएका छन् । तर, चीनको राम्रो ब्राण्डको रुपमा स्थापित सेग्वे नेपालमा पनि राम्रो गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
नेपालमा बढ्दो वायु प्रदूषण टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ? यो अवस्था बारम्बार आउन सक्छ ? सहरी क्षेत्रमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारीसाधन विकल्प हुन सक्छ तर, उपभोक्तामा आत्मवल आउन सकेको देखिँदैन । यस्तोमा अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला ?
सरकार यस्ता कुरामा सोच्दैन । १५० सीसीको मोटरसाइकलमा पूर्व पश्चिम दौडिनेहरु धेरै छन् । यति लामो यात्रा १५० सीसीको साधनमा संसारमा कहीँ कतै भएको पाइँदैन । यसले नै दुर्घटना बढी रहेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी ट्राफिक नियम मिच्ने दुई पाङ्ग्रे साधन छन् । उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । लामो रुटमा मोटरसाइकल चल्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । यो हुनसके विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे साधन हाम्रो सहरको लागि पुग्दो रेञ्जमा उपलब्ध छन् । सहरमा मात्रै जाममा हुने पेट्रोल ‘वर्न’ एक अर्बभन्दा माथिको छ । यसले गर्ने त प्रदूषण नै हो नि । विद्युतीय साधन हो भने त खर्च नै हुँदैन नि, वातावरण पनि प्रदूषित हुँदैन नि ।